देउतासँग सामाजिक दूरी ! – MySansar
देउतासँग सामाजिक दूरी !
Posted on October 24, 2020 October 24, 2020 by Salokya
दशैँका बेला शक्तिपीठहरुमा विशेष घुइँचो लाग्छ। तर यस पटक दशैँ दशैँ जस्तो छैन। कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा अधिकांश मन्दिरहरु बन्द छन्। दक्षिणकाली मन्दिरमा भने यस पटक विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर पूजाअर्चनाको व्यवस्था गरिएको छ।
यसै पनि कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरु धेरै बाहिर निस्केका छैनन्। तर पनि दर्शनार्थीहरु दक्षिणकाली मन्दिरसम्म पुग्ने गरेका छन्।
दर्शनार्थीहरुलाई मन्दिर भित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। पुजारी र स्वयंसेवकहरुले बाहिरबाटै दर्शनार्थीहरुले चढाएका पूजाअर्चनाका सामानहरु स्वीकार गरी अर्पण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। टाढाबाटै देवीको दर्शन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सामान्यतया निकै भिड हुने यो मन्दिरमा टाढाबाट मज्जासँग देवीको मूर्ति दर्शन गर्न भने पाइने अवस्था छ। यो मन्दिरमा धेरै पटक पुगिसकेको भए पनि यति स्पष्टसँग मूर्ति दर्शन गर्न पहिलो पटक पाइयो।
केही जिल्लाहरुमा मन्दिर परिसरमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। तर काठमाडौँमा त्यस्तो छैन।
पूजारीले मास्क लगाएका छन्।
पूजारीले बाहिरबाटै दर्शनार्थीको पूजा सामग्री लिन्छन्।
दर्शनार्थीको भेटी पनि बाहिरबाटै लिइन्छ।
1 thought on “देउतासँग सामाजिक दूरी !”
तपाईंलाइ अहिले कस्तो छ? कोरोनाको उपचार कसरि गरिरहनु भएको छ?